सीमामा सेना आमने–सामने : भिडन्त भए नतिजा कति खतरनाक ? | Lifemandu
सीमामा सेना आमने–सामने : भिडन्त भए नतिजा कति खतरनाक ?
| बिहीबार, ५ साउन, २०७४
काठमाडौं, ५ साउन । भारत र भुटानसँगको सीमाक्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार सुरु गरेपछि पछिल्लो विवाद चर्किएको छ । चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा चीनले बनाइरहेको सडकले आफ्नो भूमि मिचिएको भुटानको दाबी छ ।
दोकलाम रणनीतिक महत्वको क्षेत्र भएकाले भुटानलाई हेपेर चीनले अतिक्रमण गरेको हो । चीनले सडक बनाउँदा भुटानको भूमि मिचिन्छ र भारतलाई पनि गम्भीर सुरक्षा खतरा निम्तिन्छ । हामी कूटनीतिक पहलद्वारा विवाद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ र प्रयास पनि गर्नेछौँ । तर, सन् १९६२ को युद्धमा भारतले हारेको भनेर सम्झाउने हो भने हामी भन्न चाहन्छौँ– अहिलेको भारत सन् १९६२ को होइन । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाविरुद्ध इंलिस क्लब चेल्सीको राम्रो रेकर्ड रहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन पनि चेल्सी आज राति हुने च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनालाई कडा टक
च्याम्पियन्स लिगः गर वा मरको अवस्थामा रियल मड्रिड
मंगलबार राति च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल खेलमा युभेन्ट्स र रियल मड्रिड आमने सामने गर्दैछन् ।
युरोपा सेमिफाइनलमा आर्सनल र एट्लेटिको भिड्दै
एजेन्सी । युरोपा लिगको सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्ड र स्पेनका दुई ठूला क्लब आमने(सामने हुँदैछन् ।